Blockchain Izindaba 19.05.2018 - Blockchain Izindaba
Coincheck efuna imvume nabalawuli Japanese & ihlele US ukunwetshwa
ngemva kwezinyanga ezine kokulahlekelwa engakaze ibonwe $500 izigidi ezingu cryptocurrency kubaduni, Japanese cryptocurrency exchange Coincheck iceba asebuya yayo.
Eholwa entsha emva ukudayiswa ngomlilo Brokerage Monex Inc., Coincheck iye kokuchitha kakhulu yokuthuthukisa ukuphepha kanye ekuvuseleleni phakathi amaklayenti ngubani wasuka okungenani $540 abayizigidi ezingu-ngemva Hack. Lapho kuxoxwa naye, Monex isiKhulu esiPhezulu esiPhethe Oki Matsumoto uthe ulindele exchange ukuze uvikele ilayisense olusemthethweni eJapane ngenyanga ezayo. Uthi futhi uhlela ukuletha platform Coincheck ukuze Melika.
Matsumoto waqhubeka wathi "Asikwazi sandise amakhasimende ethu at Coincheck.”
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 18.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 21.05.2018